सबै भन्दा साधारण रोग श्वसन प्रणाली को एक रोग हुन भनिन्छ गर्न "क्रोनिक ब्रोंकाइटिस" मानिन्छ। यो रोग सीधा bronchi मा पुरानो र कहिल्यै प्रगति भडकाऊ प्रक्रिया सम्बन्धित छ।
यो रोग प्राथमिक वा दोस्रो या त हुन सक्छ। जबकि दोस्रो फारम, सामान्यतया श्वसन प्रणाली मात्र होइन रोग, तर पनि हृदय प्रणाली समस्या सहित अन्य पुरानो वा संक्रामक रोगहरु, को पृष्ठभूमिमा देखिन्छ प्राथमिक ब्रोंकाइटिस, एक स्वतन्त्र रोग रूपमा हुन्छ।
क्रोनिक ब्रोंकाइटिस: गराउनुहुन्छ। प्रायजसो, यो रोग श्वसन पर्चा र bronchi स्थिर जलन को फलस्वरूप हुन्छ। यो प्रदूषित हावा, धूलो, विषाक्त पदार्थ को inhalation हुन सक्छ।
तर जोखिम सबैभन्दा व्यापक समूह धूम्रपान, र मात्र सक्रिय छैन तर पनि निष्क्रिय छन्।
साथै, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस अक्सर अन्य विकारहरु, सुनिंनु वा श्वसन पर्चा र bronchi को Tissues अन्य प्रक्रियाहरू को एक परिणाम रूपमा देखा पर्छन्।
पुरानो ब्रोंकाइटिस: लक्षण र रोग को पाठ्यक्रम। रोग को मुख्य लक्षण - लगातार खोकी। रोग एक पंक्ति मा कम्तीमा पनि दुई वर्ष संग, खोकी कम्तिमा तीन महिना एक वर्षको लागि रहन्छ भने, यदि पुरानो मानिन्छ।
रोग कसरी विकसित बुझ्न क्रममा, यो श्वसन प्रणाली केही कार्यात्मक र anatomical सुविधाहरू विचार गर्न आवश्यक छ। Airway epithelium सुरक्षा कार्य कार्य जो एक कञ्चनपानी, ढाकिएको। साथै, bronchi Tissues निरन्तर खकार, जो ढिलाइ रूपमा एक स्थानीय सुरक्षा प्रणाली को प्रकारको छ, र रोगजनकों neutralize secretes।
रोग अवलोकन गर्न जान्छ जो, खकार को वृद्धि गठन को विकास को पुरानो पक्षबाट गम्भीर coughing र sputum उत्पादन। यो शरीर चयन छुटकारा गर्न खोज्छ कसरी छ। समय, प्रगतिशील रोग संग, र यो viscous हुन्छ जो खकार, को संरचना, गाह्रो sputum अप खोकी बनाउँदै परिवर्तन गरिएको छ।
क्रोनिक ब्रोंकाइटिस साँझ वा सुत्नेसमय मा सामान्यतया बुरा छ तीव्र coughing उचित, सँगसँगै छ। सँगै खोकी र expectoration विनियोजन purulent प्रकृति हुन सक्छ जो, र कहिले काँही पनि रगतको admixture संग।
क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कस्तो व्यवहार गर्ने? रोग को पुरानो फारम को उपचार एकदम लामो प्रक्रिया छ। पहिलो तपाईं रोग को कारण को छुटकारा गर्न निश्चित हुन आवश्यक छ। यो सुर्ती छ भने, यो धूम्रपान परित्याग गर्न आवश्यक छ।
रोग एक exacerbation मा, डाक्टर सामान्यतया लागूपदार्थको खकार र Thinning दबाइ को excretion सुविधा सल्लाह दिन्छन्।
साथै, रोगी विशेष साँस अभ्यास सामना गर्नुपर्छ। सही साँस अभ्यास रोग को सबै सुविधाहरू अध्ययन छ जो केवल एक अनुभवी डाक्टर चयन गर्न सक्नुहुन्छ। , श्वसन आन्दोलनहरु संलग्न छन् कि भन्ने मांसपेशीमा बलियो बनाउन सक्छ साथै शरीर देखि अतिरिक्त खकार फिर्ता गर्न नियमित व्यायाम को मद्दतले।
साथै, एउटै उद्देश्य संग, एक अनुभवी masseur संग नियमित सत्र प्रयोग गर्नुहोस्। यो पनि उपयोगी र स्पा छुट्टी छ। कुनै पनि मामला मा, उपचार आफ्नो डाक्टर रोजेका हुनुपर्छ।
क्रोनिक ब्रोंकाइटिस: को उपचार लोक उपचार। त्यहाँ परम्परागत चिकित्सा को धेरै व्यञ्जनहरु खोकी आक्रमण राहत प्रयोग गरिन्छ छन्। उदाहरणका लागि, यो ओछ्यानमा निम्न मिश्रण जानुअघि एक पेय छ धेरै उपयोगी छ। दूध र जोश एक गिलास लिनुहोस्। मह एक चमचा र वोदका दुई चमचा थप्नुहोस्। पिउन तातो आवश्यक हो।
धेरै उपयोगी र प्याज रस। बोक्रा एउटा ठूलो प्याज, साना छल्ले मा कटौती र चीनी खन्याउन। एक ढक्कन संग कन्टेनर कवर र एक दिन को लागि छोड्नुहोस्। गठन भएको थियो जो रस, 25 एमएल लागि एक दिन तीन पटक लिएको हुनुपर्छ।
पेट तल, र खकार प्लग टाढा हिंडे? अस्पताल लागि तयारी!
जिब्रोको मा अल्सर - कारण के हो?
हृदय arrhythmia कञ्चनपानी। लक्षण र उपचार
Nonpolar covalent बन्धन - एउटै अणुहरु द्वारा गठन रासायनिक बन्धन
बिजुली ड्रायर "एल्विन SU-1": समीक्षा, विनिर्देशों
Shon Uayt - संसारको सर्वश्रेष्ठ Snowboarders एक
वाचमैन VAZ-2110: आफ्नै हात को प्रतिस्थापन
Ocelot घर: सामग्री
Arkhyz, "ईगल गरेको नेस्ट": प्राप्त गर्न कसरी समीक्षा
विभिन्न eras मा प्रचार को एक माध्यम रूपमा सोभियत प्रचार पोस्टर